Abadayisi kwezimpahla njalo ezibheke kungenzeka ukubeka sokukhangisa nhlobo ku lenqwaba inethiwekhi emhlabeni wonke lwezindawo ezivakashelwe ngesimo emabhodini. Ukuqhuba ucwaningo, kuyini wonke axhumene, uthole impendulo - a ukusebenza aphansi kakhulu yokukhangisa anjalo futhi ngenxa yalokho ibuyisela.
Kungani onjalo kahle emabhodini elincane?
Singenza imibono yabo ngalolu daba. Lokho yinto izinkampani kakhulu isicelo inkonzo ukwengeza okuzenzakalelayo iziphakamiso CLASSIFIEDS khulula Ukraine.
Ngemva ucwaningo yimpumelelo ambalwa bese usebenzisa zonke izindlela, kuhlanganise nokubekwa othomathikhi futhi manual, ngithola imiphumela ezithakazelisayo kakhulu.
Uma usebenzisa indlela okuzenzakalelayo usebenzisa isofthiwe owaziwa kakhulu phakathi amakhosi sewebhu, sayithola ezingabazisayo kakhulu izinga shicilelo.
Okokuqala, lolu hlelo bengakwazanga ukubeka ebhodini lezaziso ngaletihloko ahlanganisiwe. Njengoba isibonelo, uma uthengisa umnyango, kuzomele uqale ukhethe main isihloko "Ukwakhiwa kanye nokulungiswa" ngemuva kokuphinda ulayishe ikhasi "Izinto zokwakha", futhi ngemva esihlokwaneni kunesidingo. I soft kakhulu ukwenza le misebenzi ongalifinyelela.
Okwesibili, ukuqashelwa "umazisi" e eziningi izimo, Ahluleka ukuqaphela izimpawu.
Okwesithathu, musa kahle ugcwalise kweminye imikhakha kanye ngenxa ukususwa abalawuli.
Okwesine, ukungakwazi wengeze izithombe.
Ngisho nephrojekthi ngokucophelela ukuze kwakhiwe izikhangiso, ngendlela efanele futhi isendaweni kungekho amaphesenti angaphezu kuka-nanhlanu zonke amabhodi umbiko. Kodwa isici esibaluleke kakhulu ukuthi ethandwa kakhulu ibhodi Mahhala izikhangiso classified ivikeleke kahle kakhulu ukuthunyelwa othomathikhi. Okungukuthi, sakwazi wengeze isikhangiso kuphela unmoderated namabhodi kahle avikelwe inethiwekhi emhlabeni wonke, khona ingqikithi okuyinto zero, futhi kungakho ukusebenza ngendlela efanele.
Lapho ukushicilelwa ngesandla engumuzi ethile kuphela - kuba bachitha semali isikhathi sokufuna indawo yokuhlala kanye emabhodini ngosizo izinjini.
Kususelwa konke okungenhla, senza ambalwa izincomo kulabo abadinga ukukhangisa on the board.
1. Engeza imodi ibhukwana.
2. Gcwalisa zonke izinkundla ngesimo ngokungeza izikhangiso.
3. Engeza izithombe intengo.
Ngakho ungakwazi ukwandisa nekusebenta ezikhangiso.
Noma umane uthemba ochwepheshe!
I-Zhizdra (umfula), isifunda saseKaluga: incazelo, izici, izici zokuzilibazisa kanye nemvelo yemvelo